Ngwaahịa Manufacturers | China Products Factory & Suppliers
—— Ngwaahịa ——
Micro Glass chaplet
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke Micro iko chaplet. Beads Glass bụ obere akụkụ nke iko ndị e ji mee ihe na akara akara n'okporo ụzọ na akara ngosi ụzọ na-adịgide adịgide iji gosipụta ìhè nye onye ọkwọ ụgbọ ahụ n'ọchịchịrị ma ọ bụ ọnọdụ ihu igwe na-adịghị mma - meziwanye nchekwa na visibiliti. Igwe iko ahụ na-arụ ọrụ dị oke mkpa na nchekwa okporo ụzọ.
Nkịtị okpomọkụ Road Marking Agba
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na factory nke nkịtị okpomọkụ ụzọ marking agba. Oyi mgbaze Road akara Agba bụ gburugburu ebe-enyi na enyi ngwaahịa, ọ mejupụtara gbanwetụrụ acrylic resin, acha mkpokọta nchịkọta, dịanyā ihe onwunwe na wdg ọ bụ adabara ngwa na bituminous na ihe okporo ụzọ. Ọ ga-aga nke ọma etinyere airless ma ọ bụ ikuku inyeaka spraying akụrụngwa.